प्रधानमन्त्री ओलीले किन गरेनन नेपालको नया नक्साको प्रयोग ? सामाजीकसञ्जालमा विरोध – Our News Crew
प्रधानमन्त्री ओलीले किन गरेनन नेपालको नया नक्साको प्रयोग ? सामाजीकसञ्जालमा विरोध
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नसमेटिएको नेपालको नक्सा प्रयोग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नक्सा प्रयोग गरेका हुन । प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको तस्वीरमा नेपालको निशान छाप अंकित गरिएको भएपनि उक्त छापमा रहेको नेपालको नक्सामा हालै संविधान संशोधन गरेर समेटिएको लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको नक्सा प्रयोग गरेपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गर्दै संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान जारी कि यहाँको नेतृत्वमा विसर्जन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन ।
लिम्पियाधुरारहित नेपालको नक्सा प्रयोगलाई सामान्य त्रुटि मान्न नसकिने शर्माले उल्लेख गरेका छन । उनले देशको संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान जारीछ कि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विसर्जन भयो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन । सामाजिक सञ्जालमा शुभकामनाको विरोध भएपछि ओलीले नयाँ शुभकामना सन्देश सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन । त्यसमा भने लिम्पियाधुरा सहितको भुभाग समेटिएको नक्सा प्रयोग भएको छ । त्रुटिपुर्ण नक्सा प्रयोगका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सचिवालयको तर्फवाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा थप पाँच जनाको मृत्यु
आलममाथी अनुसन्धान गर्न ७ दिन म्याद थप